Holly Nhema, chimwe chezvakakurumbira kuburitsa mumabhuku ekufungidzira | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Fantasy, Novela
Holly Nhema quote
Holly Nhema ndomumwe wevanyori vane mukurumbira vekuAmerican mune vechidiki fantasy genre. Akamira kunze kwekujekeswa kwemhando yepamusoro yemabhuku, akadai se: Iyo Spiderwick Makoronike y Rudzi rweMweya (Vagari vemhepo). Mabasa ake akashandurwa mumitauro inopfuura makumi matatu uye akamutendera kuti ave pachinyorwa che bestsellers en The New York Times kakawanda.
Munyori akagadzirawo mabasa akabatana nevamwe vanyori vane mukurumbira. NaCassandra Clare akanyora Magisterium (2014). Kune avo, Cecil Castellucci, Justine Larbalestier naEllen Kushner ndevamwe vevamwe vanhu vaakashanda navo vese. Pamusoro pe, inozivikanwa neayo graphic novel nhevedzano: Vavakidzani Vakanaka, iyo yakasarudzwa kuEisner Awards muna 2009.
1 Holly Nhema Biography
2 Zvinyorwa zvemitambo
2.1 Kubudirira kukuru
2.2 Inoshanda nevamwe vanyori
2.3 Mabhuku achangoburwa
3 Akanakisa Holly Nhema mabhuku
3.1 Mutero: Yazvino Fairy Tale (2002)
3.2 Iyo Spiderwick Makoronike: Evil Ogre (2004)
3.3 Mambokadzi wechinhu (2019)
Holly Nhema Biography
Holly Riggenbach, munyori uye mupepeti, akaberekerwa muNew Jersey musi waNovember 10, 1971. Akapedza hudiki hwake mutaundi rekumusha kwake uye kubva achiri mudiki kwazvo airatidza kufarira kuverenga. Nezvevabereki vake, ruzivo diki rwuripo. Zvidzidzo zvake zvehunyanzvi zvakaitwa paKoreji yeNew Jersey, uko muna 1994 akawana BA muChirungu.
Iye zvino, anogara muMassachusetts, New England, nemurume wake Theo Black, waakaroora naye mu1999 uye ane hukama hwakakonzera mwanakomana wake wedangwe: Sebastián Black.
Nhema akaburitsa bhuku rake rekutanga muna 2002, Mutero: Yazvino Fairy Tale. Izvi zvakanyorwa neAmerican Library Association pakati mabhuku akanakisa evechidiki. Muna 2005, akawedzera nyaya yacho na mhare, basa raakawana naro Nebula mubairo 2006. Gare gare yakaratidza iyo inotevera: Ironsides (2007), inosanganisirwa mune runyorwa rwevanotengesa zvakanyanya mu The New York Times.
Imwe yenguva dzakakosha muhupenyu hwaHolly Black yakauya mu 2003, kana aine muimbi Tony DiTerlizzi (Caldecott mubairo) yakapa mabhuku ekutanga mune akateedzera akateedzera Spiderwick Makoronike: Iyo Munda Inotungamira uye Iyo Rinoona Dombo. Aya akawedzeredzwa gore rinotevera ne: Chakavanzika chaLucinda, Iyo Ironwood Muti uye Hasha dzaMulgarath.
Nhema Akagadzirawo mamwe mabhuku ane chekuita nenyika ye spiderwick, zvakadai: YeMunda waArthur Spiderwick Nhungamiro kune Iyo Inonakidza Nyika Yakakukomberedza (2005), Iyo Notebook yeFantastical Kucherechedzwa (2005) uye Kuchengeta uye Kudyisa kweSprites (2006). Muna 2008, akateedzana akabudirira akashandisirwa bhaisikopo pasi pezita: Iyo Spiderwick Makoronike, nyeredzi mutambi Freddie Highmore.
Inoshanda nevamwe vanyori
IAmerican yakaburitsa mamwe mabhuku pamwe chete nemamwe akakosha manhamba mundima yekunyora, kusanganisira: Geektastic (Cecil Castellucci, 2009), Zombies vs. Unicorn (Justine Larbalestier, 2010), Kugamuchirwa kuBordertown (Elllen Kushner, 2011) uye bhuku rakateedzana rakadanwa Magisterium (2014), yakanyorwa mukambani Cassandra Clare uye inoumbwa nemashanu makopi.
Basa rake razvino uno rinoenderana neiyo trilogy: The Folk yeMweya. Aya mabhuku akateedzana anotanga na Changamire Muchinda (2018), iyo yaive yemavhiki akati wandei pachinyorwa bestsellers en The New York Times. Akaenderera gore rakatevera na Mambo akaipa (2019) - Zvakare nhamba yekutanga mukutengesa-, uye Mambokadzi wepano (2019), iyo yaakapedza nayo trilogy.
Akanakisa Holly Nhema mabhuku
Mutero: Yazvino Fairy Tale (2002)
Iri ibhuku rekutanga raHolly Nhema, uye zvakare rinotanga saga: Yazvino ngano. Iyo ingano yekufungidzira yakaiswa muNew Jersey, uko iyo chaiyo nyika inosanganiswa neimwe yemashiripiti inogarwa nefairies. Pakati pevanhu vanonyanya kutaurwa ndiKaye, mukadzi wechidiki uyo anodzokera kumusha kwake uye anoshuvira kuona izvo zvinonakidza zvisikwa izvo zvaakatamba nazvo achiri mudiki.
Kaye anoramba achifamba nguva dzose mukambani yechikwata chedombo chakaumbwa naamai vake, Ellen, nababa vake vokurera. Mushure mekuratidzira husiku humwe mubhawa, Ellen akarwiswa zvine hutsinye nemumwe wake, nekudaro, akafunga kudzokera kuNew Jersey nemwanasikana wake. Kaye anofarira zano rekudzokera kunoona shamwari yake yepamwoyo Janet uye pamwe shamwari dzake dzekufungidzira, dzaanoti ndedzechokwadi.
Pavanongosvika mudhorobha, Kaye anotarisa kwese kwese kune aya mashiripiti mavara, asi pasina budiriro. Humwe usiku anoenda naJanet kunofara, asi chimwe chinhu chinokanganisika uye afunga kudzoka. Pakati pesango, Kaye anowana Roiben akuvara zvakaipisisa, waanobatsira uye waanobvumirana kusangana naye zvakare. Kutenda kumusangano iwoyo, anogamuchira meseji kubva kune avo vanofungidzira shamwari, achimunyevera kuti agare kure naRoiben.
Kubva ipapo, Kaye anozadzisa zvandaishuwira zvakanyanya, sangana fairies. Ivo Vanomuyambira kuti asasvike naRoiben sezvo ari wedare rerima uye ari munhu ane njodzi. Pamusoro pe, Vanomurega azive kuti zviri kwaari kuti fairies dzirambe dziri mahara. Roiben, zvakadaro, achaedza kumuratidza rimwe divi renyika iro raasingazive.
Mutero: Nyaya ...
Iyo Spiderwick Makoronike: Iyo yakaipa Ogre (2004)
Iyo yakaipa ogre ibhuku rechishanu ra Iyo Spiderwick Makoronike. Kunge dzimwe nyaya dzinoumba saga iyi, inhau yevana yekufungidzira ine mifananidzo naTony DiTerlizzi. Nyaya iyi inogumisa akateedzana ekutanga emabasa yakagadzirwa neaya maartist mairi, ayo ainyanya kutengesa.
Zano rinotanga nekudzoka kwaJaredhi, Simon naMallory kumba kwavo., dzavanoona dzaputswa, y umo, pamusoro, mai vake havapo pano. Pakarepo, vanosvika pakufunga kuti yakaipa Mulgarath ndiye ane mhosva, saka vanofunga kuenda kundomutsvaga kuti vamukunde.
Nenzira iyi, ndichaenda pane imwe nhambo uko, kunze kwekupedzisa Mulgarath, Vachafanirwa kununura Arthur Spiderwick, anozovabatsira kudzoreredza nyika yavo.
ZVAKAIPA OGRO, THE: ...
Mambokadzi wechinhu (2019)
Iri bhuku naBlack rinomiririra zita rekupedzisira trilogy Rudzi rweMweya, una fantasy novel zverudo Izvo zvinoitika kwenguva yakareba mushure meJune kunzi Mambokadzi weFairies uye akadzingwa naMambo Cardan., kuva mambokadzi wechinhu. Kwenguva yakareba, June aifanira kurwisana nemanzwiro ake nekuda kwekutengesa kwaCardan, pamusoro pekugadzirisa nyika yepanyika.
Kuburitswa kweiyo firimu inoenderana neiyi trilogy inotarisirwa munguva pfupi, kubva pane mumwe mugadziri Universal Pictures akawana kodzero yekuteerera kune ino nyaya. Director Michael De Luca vachange vachigadzira iyo firimu, saka ichave iri pane hombe screen munguva pfupi.
June, uyo akadzingwa kubva kuFaerie world, anofanira kudzoka osangana naCardan, nekuda kwechikumbiro kubva kumapatya hanzvadzi yake Taryn, ari munjodzi. Kuva ipapo, Kutukwa kunozoburitswa, zvichiita kuti protagonist apikisane kuti aputse hex here kana kuti adzokere kunyika chaiko. Nekudaro, iyi sarudzo yekupedzisira ingakanganisa muyero waFaerie.
Aya ndiwo maratidziro anoitwa zviitiko zvakasiyana apo June naCardan vachange vari ivo protagonists. Uye zvishoma nezvishoma, Mushure mezviitiko zvese zvakanyatso kurukwa neBlack, anomirira kupera kuzere nemanzwiro mazhinji.
Mambokadzi asina chinhu (9th ED):...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Holly black
Laura Mas. Hurukuro nemunyori weMudzidzisi weSocrates
Mabhuku anobva pazviitiko chaizvo